Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): မှတ်သားလေ့လာစရာတွေ
at 10/18/2017 10:29:00 AM
# ဆိုရှယ်လစ် ဦးကျော်ငြိမ်းသား ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းကို ကျမ Thet Zin လုံးဝ ကြည့်မရဘူး ဒါပေမယ့် အချို့သူ့စာတွေမှာ မှတ်သားလေ့လာစရာတွေပါတယ်#
May I wish youasincere Happy Birthday…
I do haveagreat respect for your bravery in opposing the military dictatorship, standing firm on your principles for the country and the people.
You had won the election and the people had elected you as their leader.....
ဒါဟာ..(အရှိ) တရားပါပဲ….ဒီ..(အရှိ) တရား…နောက်က… (တာဝန်) ဆိုတာကြီးကိုတော့ အောင်မြင်မှုကရတဲ့…ပျော်ရွှင်မှုအရှိန်တွေကြားမှာ…အများစုက…(မေ့)နေကြတယ်..လို့ထင်မိတယ်…လက်ခုပ်သံတွေကြားမှာ (ဝေဖန်သံ) ကိုမကြားချင်ကြတော့ဖူး ဒါဟာလည်း… (သဘာဝ) တရား… ပါပဲ...။ ကျနော့်အတွက်ကတော့… Everything is (Relative) ဆိုတဲ့ သဘောဝတရားကို…လက်ခံယုံကြည်မိတယ်….။
Determination of Relativity is (TIME).. at least for me .
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာ…ကွန်မြူနစ်စနစ်က (အမှန်) တရား ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ကျနော့်အဖေတောင် လက်ဝဲ pressure ကိုမခံနိုင်လို့
ငါလည်း Marxist ပါပဲပြောမိလို့… အမ..အဖေက… ဟား..ခဲ့ဖူးတယ်လို့ အောင်သန်း၏အောင်ဆန်း..စာအုပ်မှာ အမ ဦးလေးကရေးပြခဲ့ပါတယ်။
ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို တကယ်အကောင်အထည်ဖေါ်ကြတော့ Natural Laws တွေနဲ့..ဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်
COMMUNISM IS NOTHING BUT IDEALISM
UNKNOWN TO SOME OR MANY
THERE IS (REALISM) ALWAYS CHALLENGING (IDEALISM)
ဤသည်လည်း..(အရှိ) တရားပါပဲ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြိ့း…. ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကွန်မြုနစ်ဝါဒဟာ..အခုတော့… FAILURE ပါပဲ …
ROTTING IN THE HSITORY DUSTBIN
AS A FAILED HUMAN EXPERIMENTATION.
မော်စီတုံးဟာ အာဏါကိုနားလည်ဆုံး အာဏါရှင်တစ်ယောက်ပါ သို့သော် IDEALISM ကိုရင်မှာပိုက်မိတာကြောင့် National Development မှာ… (အရှုံး) …နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်….Steel Production မှာ UK ကိုမှီရမယ်လို့..ထ..ကြွေးကျော်တော့ လူတွေဟာ တွေ့သမျှ..Steel Products…. သံတိုသံစတွေကို ကြိုတဲ့… Backyard Stee Mills တွေပေါ်လာပါတယ်….
The Real useful Steel Production & Requirements တွေကို ဥက္ကဋ္ဌကြီး..(မသိ) ခဲ့ဖူး…ပြောရဲတဲ့သူတွေလည်း..မရှိဖူး…မန်ကျူးရီးယားက… Steel Factory ကိုသွားကြည့်မှ….Real Steel Production အတွက် ဘယ်လောက်…. ENERGY လိုသလဲဆိုတာ… ဥက္ကဋ္ဌမော်…မျက်စိနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်…
သို့သော်….နောက်ကျသွားပြီ….Commune တွေကိုလည်း..လက်တဲ့စမ်းလိုက်ကြတာ….Grain Production ကျပြီး..လူတွေ ..(သေ) လိုက်ကြတာ….ဒါပေမဲ့… ဥက္ကဋ္ဌကြီးမော်ရဲ့..ရထားလမ်းမှာ…. စပါးကျီတွေ..တောင်ပုံယာပုံ… စုပြီး.. ခေါင်းဆောင်ကြီးကို (ညာ) ခဲ့ကြတယ် မော်က..တပြုံးပြုးပေါ့
နောက်ဆုံး…မဖိနိုင်…မဖုံးနိုင်တော့..မှ (ပေါ်) လာတော့…. သိပ်နောက်ကျသွားပါပြီ….
GREAT LEAP FORWARD …BECAME A GREAT FAILURE လူတွေလည်း သန်း (၄၀) လောက်သေသွားပါပြီ ဥက္ကကြီးမော်လည်း…. သိက္ခာတွေ..ကျလို့
မော်ရဲ့ ဆရာဝန်ရေးတဲ့..စအုပ်မှာ အကုန်ပါပါတယ်….
ကျနော်ထောက်ပြချင်တာက… (အာဏါ) ကိုပါ….
အာဏါကြောင့်….လူတွေဟာ… (အမှန်) ကိုမပြောရဲကြတော့ဖူး….အာဏရမှ…. လာကပ်တဲ့သူတွေအများဟာ…(အားလုံကိုမဆိုလိုပါ)Opportunists တွေများကြပါတယ်…..Opportunists နဲ့.. Genuine သမားကို.(ခွဲ) ရတာအခက်ဆုံးပါပဲ ကျနော်ကငယ်ငယ်လေးရှိပါသေးတယ်…. ၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ… အာစရိရေ…SOLID ပဲဆိုတဲ့ လူတွေ…အကုန်..ရှုံး..တာပါပဲ
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ..ဒီလိုနဲ့..ရှုံးခဲ့ရတာပါ…ဒါကို …. အမ..အသိဆုံး ဖြစ်မှာပါ…..
UNITY IS STRENGHT ဆိုတဲ့..သဘောတရားကို
လူတိုင်းအော်ကြတာပါပဲ သို့သော် .. လက်တွေ့မှာ..practice လုပ်နိုင်တာ….အမ..အဖေတစ်ယောက်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်….ဒါကြောင့်..he became the first among equals….ဒုတိယက… ဦးနုဒါကြောင့်..သူလည်း…၀န်ကြီးချုပ်လာဖြစ်တာပါပဲ သခင်သန်းထွန်းရော..ကျနော့်အဖေတို့က…၀ါဒရေး..တိုက်ပွဲတွေနဲ့..နဖန်းလုံးလုံးခြာလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ….ဗိုလ်ချုပ်က…on the elephant… ပြုံးပြုံးကြီးပဲ….ဗိုလ်ချုပ်က..Micro level ကိုစိတ်မ၀င်းစားဖူး…၀င်မကစားဖူး…Macro Level မှာပဲ…. ကစားတာပါ….Macro level ကစားဖို့..Knowledgable ဖြစ်ဖို့က You need Time & Space …to THINK & REFLECT Micro level ၀င်ပါတာနဲ့…. Time & Energy are (WASTED)
အီးစီ အစည်းအဝေးမှာ… ကျနော်အဖေက…(ငြင်း) တော့… ကျနော့်အမေကို လာဆူတာက…ဗိုလ်အောင်ကြီး….ဒါပါတီ…ဆုံးဖြတ်ချက်..ဘာဘာညာညာ..လာဆူတယ် ဗိုလ်အောင်ကြီး..သူ့ဟာသူလာဆူတာလည်း..ဖြစ်နိုင်သလို ဗိုလ်ချုပ်..လွှတ်လိုက်တာလည်း..ဖြစ်နိုင်တာပဲ ဗိုလ်ချုပ်က..အမြဲ…စဉ်းစားနေတာ….ဘယ်လိုလူကို…. ဘယ်နေရာ..ဘယ်လို (သုံး) ရမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားနေတာ….
အရာရှိ (၂၀၀) ပဲ… အင်္ဂလိပ်ကခွင့်ပြုတယ်
ဗိုလ်ချုပ်က..သူ့စစ်တပ်ကို… ပညာတတ်တွေကို..ဦးဆောင်စေချင်တယ်…ရဲဘော် (၃) ကျိပ်လွှတ်ကြတော့… ကျနော့်အဖေက…Custom officer ညမှာမှ.. ပြည်သူအရေးတော်ပုံပါတီကို ဦးဆောင်နိုင်တယ်..
သခင်ချစ်…ဒါကြောင့်…သခင်ချစ်က .. ရွေးထားတဲ့သူတွေအစား…သူ့လူတွေ…ထိုးထဲ့လိုက်တယ်….
ငါ့လူပါအောင်…ထဲ့လိုက်တာ ဗိုလ်ချုပ်က… ပညာတတ်..intellectually အတွေး..တွေးတာ… ဒီလူတွေနဲ့….စစ်တပ်ကိုထောင်ရမှာ….တခါမှ..ဗိုလ်ချုပ်ဟာ…ဒီလောက်..စိတ်မဆိုးဖူးဖူးတဲ့ ၁၉၃၆ Strike မှာလက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ ကျော်ငြိမ်း သခင်ချစ်ဗိုလ်ကျတာကိုခံရသလား…မင်းတော်တော်ဆောက်သုံးမကျတာပဲ..ဆိုပြီး..
ငါလည်း…ဒီလောက်ပဲ…အရည်အချင်းရှိလားမှ..မသိတာကွာ… I may have reached my Peak လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်တဲ့  ကျနော့်အဖေနဲ့ ဗိုလ်မောင်မောင် ဗိုလ်အောင်ကြီး.စတဲ့ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံလူတွေပြန်တွေ့ပေးတဲ့.. Unpublished ..စာအုပ်မှာ..ပါပါတယ်…
အမှန်က… ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ဆိုးတာက… lost Opportnities ကိုပါ…ကျနော့်အဖေရဲ့…အားနဲချက်တစ်ခုက သိပ်အားနာတတ်တယ် ဆင်းရဲတဲ့ဘ၀ကတက်လာတော့.. လူတွေကို..ဟောက်တာပါတာမလုပ်ချင်ဖူး တနည်းအားဖြင့်…လူကြီးလိုမနေတတ်ဖူး.. ဒါကို ဗိုလ်ချုပ်က (သိ) ပုံရတယ်…
ဗိုလ်ချုပ်က..အားမနာတတ်ဖူး…လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို..လုပ်ရဲတယ်… very decisive…
He could be also ruthless..if necessary
You also inherited these qualities…. in my opinion…
သခင်သန်းထွန်းရဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေ နဲ့ ..အားပြိုင်မှုက..သိပ်ပြင်းထန်တော့….ကျနော့အဖေက ကိုယ့်လူကိုကိုယ်ချကြွေးရမှာကို..မလုပ်ခဲ့ဖူး…ဒါလည်း..အားနဲချက်တစ်ခုပါပဲ ဗိုလ်ချုပ်မှာ…ဒီအားနဲချက်မရှိဖူး
မရှိတဲ့အပြင်…(သုံး) စရာရှိရင်လေ… ရန်သူဖြစ်မဲ့ပြိုင်ဖက်တွေကိုတောင်ဆွဲစားရဲတယ် ဥပမာ… အင်္ဂလိပ်..အထာ..သိတဲ့.. ဘကြီးဘဖေလိုလူမျိုးကိုဆွဲခေါ်လာတာ ဘကြီးဘဖေ လာဘ်စားတယ်ကြားတာနဲ့
ချက်ချင်းဖြုတ်ပြစ်လိုက်တာပဲ ICS ထဲမှာ အတော်ဆုံး..ဦးတင်ထွဋ်ကို Aung San- Atlee အစည်းအဝေးကို ဘုရင်ခံကထဲ့တာပဲ ဟိုရောက်တော့… ဖဆပလလူဖြစ်အောင်..ဆွဲစားပစ်လိုက်တယ် လူတော်တွေကို..သုံးရဲတာပါ …
ဘယ်သူလာလာ..ဗိုလ်ချုပ် က Confidence အပြည့်ပဲ
Honesty အပြင် Fairness ပဲ
ဗိုလ်ချုပ်က…ကျော်ငြိမ်း..မင်းတို့ ဆိုရှယ်လစ်တွေကို (၂) နေရာ ကွန်မြူနစ်တွေကို..(၂) နေရာပေးမယ်လို့….offer လုပ်လာတယ် ဒါ… Fairness ကိုပြတာ… principle ရှိတာကိုပြတာပါ….
ဦးကျော်ငြိမ်းက..လျှင်တယ်….ငါတို့… (၁) နေရာပဲယူမယ်ဆိုတော့….ဗိုလ်ချုပ်ကအေးကာင်းတယ်..ကွန်မြူနစ်တွေကိုလည်း..တနေရာပဲပေးမယ်ဖြစ်သွားရော
သခင်မြ က..ဆိုရှယ်လစ်ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဖဆပလမှာ..ဒုတိယခေါင်းဆောင်..ကွန်မြူနစ်မှာက… သခင်သန်းထွန်းနဲ့… ဦးသိန်းဖေ (၁) နေရာပဲဆိုရင်…(လု) ကြရတော့မယ် ဒါကြောင့်..တမင်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တာ….ထင်တဲ့အတိုင်း…ဦးသိန်းဖေက ၀န်ကြီး ဖြစ်လာတယ် သခင်သန်းထွန်းကမကျေနပ်ဖူး
ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်.. (ဂျင်း) ထဲ့လိုက်တာပါ…
ဗိုလ်ချုပ်က..ဒီလောက်လျှင်တာ….ဦးကျော်ငြိမ်း အကွက်ကို မမြင်ပဲနေမှာလား…
ကွန်မြူနစ်တွေက..အမြဲ…ဗိုလ်ချုပ်ကို..အားစမ်းနေတာ…တဖက်ကလည်း… fair ဖြစ်တယ်…တဖက်ကလည်း…ဆိုရှယ်လစ်တွေ..အမုန်းခံနေတာ… အသာလေး.ရှောင်ပေးလိုက်တာပေါ့ ဒါကြောင့်..အမ အဖေကို…ကျနော်ဆရာဂိုဏ်းထဲမှာ ထားရတာပါ
နိုင်ငံရေးအကွက်မှာ…ဗိုလ်ချုပ်လောက်…(လျှင်) တဲ့သူမရှိဖူး (လျှင်) ပေမဲ့...Honest လည်းဖြစ်တယ်….
အင်္ဂလိပ်အ၀င်…စစ်တပ်ကိုပြန်ဖွဲ့တော့….ဗိုလ်ချစ်မြိုင်က..ရွာပြန်တော့မလို့တဲ့…ဗိုလ်ဇေယျက…ချစ်မြိုင်မင်းကိုဗိုလ်ချုပ်လိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတော့….သွားတွေ့တော့… မင်းဘာရွာပြန်မှာလဲ တပ်ထဲဝင်ဆိုပြိး… အမိန့်နဲ့… ၀င်ခိုင်းတာပဲ ဗိုလ်ချစ်မြိုင်က တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ.. ကလာတဲ့..သူ… မင်းအဖေတို့ဗိုလ်ချုပ်တို့…အစည်းအဝေးလုပ်နေရင် အန်ကယ်တို့က..ဂိတ်က…လုံခြုံရေးအတွက်..တာဝန်ယူရတာပေါ့လို့ ဗိုလ်ချစ်မြိုင်က… ဂုဏ်ယူစွာ.ကျနော့်ကို…ပြောဖူးပါတယ်….
ဟော..ဗိုလ်အောင်မင်းတို့လို..ဗိုလ်သိန်းထန်တို့ကြတော့ မင်းတို့..ပြည်သူရဲ့ဘော်လုပ်ဆိုပြီး လူမှန်..နေရာမှန်..သုံးဖို့စဉ်းစားပြိးသား တပ်ထဲ..အ၀င်မခံတော့ဖူး….ဒါကြောင့်လည်း…BIA ၀င်လာတော့….ဗိုလ်မောင်မောင် ဗိုလ်အောင်ကြီး.. ဗိုလ်သိန်းမောင် စတဲ့ ဦးဗဆွေကြီးရဲ့..ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီက စစ်ရေးကော်မီတီဝင်တွေ.. ကျောင်းသားသမဂ္ဂကလာတဲ့သူတွေ အားလုံးစစ်တပ်ထဲရောက်ကုန်ကြတာပေါ့…သူတို့က..(ယူနစ်) အုပ်စုလာဖြစ်ကြပါတယ်….ဗိုလ်ခင်မောင်ကလေးတောင်..BIA ထဲရောက်သွားရတယ်
NATION BUILDING ..NATION DEVELOPMENT အတွက်ပါ…Prepared လုပ်ခဲ့ကြတယ်….
ချီးကျူးစရာအကောင်းဆုံးက… MACRO level ကအုပ်ချုပ်ပြီး…လူမှန်..နေရာမှန်… ရွေးတတ်တဲ့အပြင်
VISION & INTELLECTUAL THINKING ရှိတယ်…
My father hadareputation for good Management
တကယ်က..Human Management မှာ အလွန်အားနာတတ်တယ် Policy ကိုနိုင်လို့… Governance ကိုနိုင်တာပါ…Government ဆိုတာ..Policy နဲ့..အုပ်ချုပ်ရတာ..မဟုတ်ပါလား?
ကျနော်အဖေက..အမ အဖေလို… အမိန့်..ပေးခိုင်းရာမှာ..မပြတ်သားဖူး…စည်းရုံးရေးရော… နိုင်ငံရေးရော…စီးပွားရေးရော..နားလည်တဲ့..
တဖက်ကမ်းခပ်အောင်..တော်ပေမဲ့… စီးပွားရေးကို..နားမလည်ပါဖူး…Economically Mao wasaFAILURE ..in my opinion
ချောင်အင်လိုင်းတို့…တိန်လျှောက်ပိန်တို့ရှိလို့..ခံသာတာပါ Mandela Legacy is alsoaFAILURE
Because of ECONOMIC FAILURE
ECONOMIC SUCCESS မရှိလို့…မရပါဖူး
တိန်လျှောက်ပိန်ဟာ… ECONOMICS ကို MACRO LEVEL ကပဲထိန်းသွားတာပါ….ဗိုလ်ချုပ်ဟာ… အခွင့်မရခဲ့လို့ပါ….ရခဲ့ရင်..သူသာအသက်ရှင်ခဲ့ရင်….
MACRO LEVEL ကပဲထိန်းပြီး
ဦးကျော်ငြိမ်းလိုလူမျိုးကိုပဲ ..(ခိုင်း) စားမှာပါပဲ
ICS ဦးတင်ထွဋ်.. ဦးရာရှစ်..စတဲ့ CAPACITY ရှိတဲ့…CAPABILITY ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကို တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးအတွက်….ခိုင်းစားမှာပါ…
ကျနော်…အသိ… အမြင် ကလေးကို ပြောပြပါရစေ…
ရာထူး..အာဏါ..Space & Power ပေးပြီး…ခိုင်းစားတာပါ…စီးပွားရေး..ဆိုတာကတော့… (ဝေ) စားတာပါ….စီးပွားရေးကြတော့…Wealth ကို..(ဝေ) စားတာပါ…. အမက… နံမည်ရှိပြိးသား…
YOU ARE THE DEMOCRACY ICON
YOU ARE ALSO THE ONLY DAUGHTER OF OUR BELOVED LEADER
(Space) လေးပေးပြီး… လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးပေး…ownership လေးပေးခိုင်းရင် အားလုံးဟာ..မမောနိုင်…မပန်းနိုင် …အမကို…၀ိုင်းကူကြ…၀ိုင်းထမ်းတင်ပေးကြမှာပါ…ရလာတဲ့…အောင်မြင်မှု…ဟာ…
THE LEGACY OF DAW AUNG SAN SUU KYI အဖြစ်ကျန်ခဲ့မှာပါ….
ငြိမ်းချမ်းရေး..စီးပွားရေး..အားလုံးမှာ… SEQUENCING ဆိုတာတွေရှိပါတယ်…
ဥပမာ…ရန်ကုန်မြို့ကြီး…စင်္ကာပူလောက်..(လှ) နေပေမဲ့…လူတွေ…(သုံး) စရာ…(၀င်ငွေ) မရှိရင်….
တချိန်က…တရုတ်ြပည်…ယနေ့..North Korea မှာလို….လမ်းကြီးတွေ… အဆောက်အဦးကြီးတွေ…သာရှိပြီး…(လူ) တွေမရှိသလို…ဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်နေမှာပါ….ယနေ့…နေပြည်တော်လိုပေါ့
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေသာ… နေပြည်တော်ဆောက်မဲ့..(ငွေ) တွေကို….(လျှပ်စစ်) ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်….သာသုံးခဲ့ရင်….တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးအတွက်…. အလွန်တန်ဖိုးရှိခဲ့မှာပါ….
Second Park Chung Hee ဖြစ်နိုင်တာပေါ့
စီးပွားရေး…ထူထောင်ဖို့…Economic Infra Structures တွေမရှိလို့…မရပါဖူး…
(လူ) တွေ..အလုပ်ရဖို့… (လုပ်ငန်း) တွေရှိရမယ်
(လုပ်ငန်း) တွေရှိဖို့…. လမ်းတွေရှိရမယ်… လျှက်စစ်..မပြတ်အောင်ပေးနိုင်ရမယ်
အရေးအကြီးဆုံးက….skilled workers တွေရှိရမယ်…
ဒါတွေ..မရှိပဲ….ဘယ်သူမှ… လာ.Invest မလုပ်ကြပါဖူး…လာ Invest လုပ်ကြလဲ..ခဏပဲ..(ရှုံး) ပြီး လံပြေးကြမှာပါပဲဒါတြွေုဖစ်လာဖို့က… Time အပြင်…
Correct & Proper Investment တွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ် ဒီလို… ဖြစ်ဖို့က… စီးပွားရေး..တကယ်လုပ်ဖူးတဲ့…
Seasoned experience hands တွေလိုပါတယ် …
ကျနော်တို့..ဗမာတွေကြားမှာ… တကယ်စီးပွာရေးကိုနားလည်တဲ့ သူတွေ..အင်မတန်ရှားပါတယ်….
အများက..UN မှာ.. project monitoring… Supervisory role လုပ်လာခဲ့တဲ့ သူတွေက..များတာပါ…
Real work ကို..လက်တွေ့လုပ်လာခဲ့ကြတဲ့…. real life experience သမားတွေ..မဟုတ်ပါဖူး
ဒါပေမဲ့… ဘာမှမတတ်ပဲ…တတ်ယောင်ကားလုပ်နေကြတဲ့ ဒေါက်တုတွေနဲ့တော့…. တော်သေးတာပေါ့
ကျနော့်အမြင်ကို… Honestly တင်ပြပါရစေ…
အမက… Singapore ကိုမှီရမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ထင်တယ် အမရဲ့…လူတွေက..သူ့ထက်ငါ… မစားရ၀ခမန်း…Promise တွေပေး… စိတ်ကူးယဉ်ပြီး
လေလုံးထွားနေကြတယ် …သူတို့ပြေတာတွေ..အားလုံးဟာ….(ထုံး) သုတ်နေကြတာပါအမရေ…
Correct Investment က… Infrastructure Investment သာဖြစ်သင့်တယ်
ဥပမာ….အမတို့ရဲ့…First Priority should be Electricity sector…
တရုတ်တွေဟာ… လိုအပ်ချက် requirement ရဲ့..၄ဆ ..Electricity Production ကိုလုပ်တာတောင်
တကယ်…developed လုပ်ကြတော့… မလောက်..ဖြစ်ခဲ့ရတယ်…
တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင် Li Peng ရဲ့သားနဲ့သမီးက
Electricity Sector ကိုအုပ်စီးထားတာကြောင့်
There was some corruption but they did delivered the necessary power supply
Sequencing ရှိပေမဲ့…. စီးပွားရေးဆိုတာ.. မီးခလုတ်လို…ချက်ချင်း..On& Off လုပ်လို့မရပါဖူး…
You have to give time to harvest experienced hands…
Required Experienced expertise ကချက်ချင်းရှာလို့..မရနိုင်ပါ…
ဒါကြောင့် ..လီကွမ်ယူးက… Foreign Investors တွေကို Business တွေထူထောင်ခွင့်ပေးပြီး
Technical Transfer ကို FORCED လုပ်ခဲ့ရတယ်….
ဒီလို..FORCED လုပ်နိုင်ဖို့….တကယ့်လူတော်တွေကို…Government မှာ… အလုပ်ခန့်ပြီး…. Supervised လုပ်စေရတယ်…
ဒါက..Singapore လီကွမ်ယူးရဲ့..Model ပါ….
လူဆိုတာလေ…တနေရာမှာ (ချော်) နေပေမဲ့
You must know I amavery strong NATIONALIST Maybe rather too strong for your taste (ကွဲ) ပြဲနေတဲ့ …ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဆော်ဒီမှာခေါ်ပြီး….ဆွဲစေ့….ပေးလိုက်တာ…ဟန်….
I hate him for that…ကျနော်နဲ့…Chiang Rai မှာတွေ့တော့….You were wrong လို့ပြောတော့… No..I was right တဲ့ My feeling toward him was not positive But… ငြိမ်းချမ်းရေး..process မှာ…တွေ့ကြတော့ He wasatotally different person….Because the Interest is now different
So called Rohingyar issue မှာ ..we are totally on the opposite sides
But in the case for PEACE and minorities issues our stands are similar to some extent
Because our Interests coincide, wanting PEACE for the country.
He is alsoauseful personality because he is an intellect and he understands the Western thinking procedures and process, so ALL Ethic leaders have to rely on his assistance and advice and above all they TRUSTED him because he isaSHAN.
As you know very well… TRUST is not an easy commodity.
You know more than anyone by now after leading the PEACE PROCESS.
(လူ) ဆိုတာ… တနေရာမှာ … ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေပေမဲ့…တခြားတနေရာမှာ…အလိုတူဖြစ်နေတတ်ပါတယ်
You are the Leader, you are the one who has to decide. We can only EXPRESS.
ဒို့ခေါင်းဆောင်…ဒီမိုကရေစီအိုင်ကွန် လိပ်ခေါင်းထွက်အောင်…ထောက်ခံရင်..ဒို့တာဝန်ကျေပြီ ကျန်တာ..အမေစု…လုပ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး….
ဖါးလည်း….မဖါးတတ်သလို မျက်စိမှတ်ပြီး….မှန်ပါ့ဘုရားလို့ထူးမဲ့ လေနဲ့အတူ..ရိမ်းပါမဲ့…လူစားမျိုး..မဟုတ်ပါ….
My Love and My Loyalty is for my country, people and Buddhism My Goal is that I want to die peacefully without guilt Telling my father… I did my best I don’t have any desire for any thing Thus I have also lost my DRIVE …
ဒါကြောင့်…ကျနော်ပေးနိုင်တဲ့…မွေးနေ့လက်ဆောင်ကတော့ တိုင်းပြည်အပေါ်ထားတဲ့ (စေတနာ) ပါပဲ
ကျနော်ကတော့ကျန်တဲ့သူတွေလို (မဖါး) တတ်တာ
အကြိုက်လိုက်မပြောတတ်တာကိုတော့ ခွှင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါ….လက်ခုပ်သံတွေကြားမှာ..ကျနော်ရဲ့ (ဝေဖန်သံ) ကို ငှက်ဆိုးထိုးသံလို..ခံစားရမဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို (သိ) ပါတယ်….
I am just who I am…
And I don’t work well under autocratic rulers.
My desire is to go and write some where.
Wishing youavery Happy Birthday and I hope you can DELIVER for the country
May Lord Buddha bless you